Iimpawu zendlela yokucoca umlilo
I-Assay yomlilo ayisiyondlela yakudala yegolide nesilivere, kodwa nendlela ebalulekileyo yegolide kunye nesilivere. I-geology, imigodi, igolide kunye ne-smelters yentsimbi ekhaya nakwelinye ilizwe ziyisebenzisa njengeyona ndlela iqhubekayo kwaye isetyenziswa ngokubanzi kwimveliso. Amanye amazwe amisele le ndlela njengendlela esemgangathweni. Ilizwe lethu likwayimisele njengendlela esemgangathweni kazwelonke yokumiselwa kwegolide yegolide, igolide, negolide yegolide nolwalukileyo. Ngophuhliso lwenzululwazi netekhnoloji, zininzi iindlela ezintsha zokuhlalutya igolide nesilivere, kwaye izixhobo zehlalutyo ziya zisiba ngaphezulu nangakumbi. Xa kuthelekiswa nezinye iindlela, indlela ye-ossay ye-ossay ineenkqubo ezininzi zokusebenza kwaye ifuna izakhono ezithile. Baninzi abahlalutyi bazama ukusebenzisa ezinye iindlela zokuhlalutya endaweni yezizathu zomlilo.
Nangona kunjalo, indlela ye-assay ye-assay ayinakufikeleleka. Ukumiselwa komxholo wegolide kwizinto eziluhlaza okwesixhobo okanye igolide ecocekileyo, ukuchaneka kwayo kwaye kuchanekile kwaye kuchanekile kwezinye iindlela ngqo. Kuhlalutyo lolawulo lokucaphuka kwegolide kunye nesilivere, uhlalutyo lwesi-Assay oShayisileyo unokunika iziphumo eziqinisekileyo kuwo onke amaqela kwingxabano. Kungenxa yokuba isivungu somlilo sineenzuzo ezininzi ezizodwa zezo ezinye iindlela zokuhlalutya abanazo:
(1) Ukumelwa okumnandi kwesampulu. Igolide nesilivere zihlala zikhona ngokungalinganiyo kwisampulu kwi-odolo ye<g / t. I-Assay yomlilo inobukhulu obukhulu besampulu, ngokubanzi i-20 ukuya kwangama-20 ukuya kwengama-20 ukuya kwengama-20 ukuya kwe-40 ukuya kwi-paws ukuya kwi-100g okanye ngaphezulu inokuthathwa. Ke ngoko, ummeli wesampulu ulungile. Impazamo yesampulu incitshisiwe ibe ubuncinci.
(2) Ukuziqhelanisa kakhulu. Inokuziqhelanisa nezami, ukusuka kwi-ore, igolide igxile kwiGolide ye-Afloy, indlela ye-Assay Assay inokuthi ichongise ngokuchanekileyo igolide nesilivere, kubandakanya la ma-AntimonON ezingenakusonjululwa ngohlalutyo olumanzi. Ngohlalutyo lwamacandelo aphambili kwigolide ecocekileyo, isivusi somlilo sinokufumana iziphumo ezanelisayo. Ngaphandle kweesampulu ezimbalwa kakhulu, le ndlela inokuhlengahlengiswa phantse kuzo zonke izimbiwa.
(3) Ukusebenza kakuhle kwempumelelo kuphezulu, ukufika ngaphezulu kwamawaka alishumi. Isixa-mali esincinci segolide nesilivere sinokuba sisityebi se-tins ukusuka kumashumi ee-grams zeesampuli eziqukethe inani elikhulu lezinto ze-matrix kwiqhosha lovavanyo lwegolide. Nokuba iimitha zegolide nesilivere ziyatyetyiswa, ilahleko zincinci kakhulu, -ecala kuphela yipesenti ezimbalwa. Ngenxa yokuqulunqwa okulula kwegranuule ecekeceke (okanye i-Slag yokuphucula), kuyingenelo ukusebenzisa iindlela ezahlukeneyo zokuvavanya ukumisela kwixesha elizayo.
(4) Iziphumo zohlalutyo zinokuthenjwa yaye ichanile. Uhlalutyo routine South African Rand Company ngegolide ecocekileyo (>99,9%), 74 Iziphumo uhlalutyo sampulu inye, kude olusezantsi (S) 0.0058%. Le S 10 Iziphumo uhlalutyo iimveliso zasekhaya efanayo kwakhona malunga 0,005%. Ukutyhubela iminyaka, ezinye abaphengululi ekhaya nakumazwe aphesheya baye bazama endaweni ngokupheleleyo kulingwa umlilo kunye nohlalutyo olutsha zimanzi imichiza okanye uhlalutyo instrumental, kodwa abakhange baphumelele kangaka kude. Werbicki et al. wafanisa iindlela ezintathu okuhlalutya Au e isisombululo-Aas, ICP-AES, yaye indlela kulingwa, waza wanika kuphambuka S standard uhlobo ngalunye zahlalutywa iilebhu-18. Isiphumo kukuba ICP-AES kunye Aas iindlela ezisisiseko Aluguquguquki, kodwa bonke kubi kancinane ngakumbi indlela trial igolide Wall wabonisa ukuba indlela kulingwa umlilo efanelekileyo iisampulu ezinomthamo igolide<1μg ~ 1G, yaye ichanile kunye ngqo zingcono kunezinye uhlalutyo instrumental.
Fire Uvavanyo theory kunye nendlela OKULANDELAYO